सान्ता Muerte लाई प्रार्थना गर्नुहोस् कि उनी मेरो बारेमा सोच्छन्। ? 24 घण्टा
मलाई सोच्न पवित्र मृत्युलाई प्रार्थना गर्नुहोस् हामीलाई चाहिएको मद्दत पुर्‍याउन यस सन्तलाई हाम्रो सम्बन्धमा प्रवेश गर्न यो अधिकार प्रदान गर्नु हो।
यो नोट गर्नुपर्दछ कि यो प्रार्थना हो जुन केवल भूतपूर्व साझेदारहरूको सम्बन्धमा मात्र गरिदैन तर यो व्यक्तिले हामीलाई उनीहरूको सोचाइमा दिमागमा राख्नुपर्ने जहिले पनि गर्न सकिन्छ।
यो एक शक्तिशाली प्रार्थना हो जुन हामीले होसियारीसाथ गर्नुपर्दछ किनकि परिणामहरू आश्चर्यजनक छन् र हामीले प्रार्थना गर्न छोडेको क्षणबाट यो अवलोकन गर्न सकिन्छ।
1 मलाई सोच्न पवित्र मृत्युलाई प्रार्थना गर्नुहोस्
1.1 मेरो बिचार गर्न पवित्र प्रार्थनामा म कहिले प्रार्थना गर्न सक्छु?
1.2 के प्रार्थनाले छिटो काम गर्दछ?
1.3 यो प्रार्थना केको लागि हो?
हराएको म निर्धक्क छु, साहस र प्रेम बिना।
हराएको छु मैले महसुस गरें, तर म आफैंलाई भेट्ने आशा गर्दछु। मैले तपाईंलाई पुकार्दा, मेरो विश्वास पुनर्जीवित भएको छ।
म तपाईं कहाँ आउँछु किनकि म मेरो अस्तित्वलाई पुनः प्राप्त गर्न चाहन्छु। म अँध्यारो सडकमा हिडेको छु, यस्तो लाग्छ कि मेरो भाग्यको न्याय गर्दछ।
केही क्षणहरू जुन मलाई झर्छ र म उठेको भए पनि, आज म रोक्न असक्षम भएको भूमिमा छु।
धन्यको मृत्यु, ममाथि दया गर्नुहोस् र मद्दत गर्नुहोस्।
धन्यको मृत्युले मलाई जीवनको मूड फिर्ता ल्याउँदछ, यो भइरहेको छ आधा बाटोमा पूरा गर्नुहोस्
धन्य, मलाई बाँध्ने साins्गलाहरू काट्नुहोस् र मलाई पछाडि पछाडि दिनुहोस् जुन मलाई उडायो।
म तपाईंमा मात्र विश्वास गर्दछु, केवल म तपाईंलाई प्रार्थना गर्दछु, केवल मलाई तपाईं निको हुन आवश्यक छ।
मलाई जीवनको मार्गमा फर्कनुहोस्, जहाँ मेरा आँखाले उज्यालो देख्न सक्छन्।
जहाँ मेरो कानले संगीत सुन्छ र मेरो छालाले बतासको स्पर्शलाई महसुस गर्दछ।
मलाई फिर्ता दिनुहोस्, मलाई फिर्ता ल्याउनुहोस् जुन म टाढा जान चाहन्न। म फेरि जीवित हुन चाहन्छु।
मलाई थाहा छ तपाईं मेरो कुरा सुन्नुहुन्छ, म तपाईंलाई बिन्ती गर्दछु, मेरो जीवन परिवर्तन गर्नुहोस्, म यो पक्षको लागि धन्यवादको रूपमा वचन दिन्छु (प्रतिज्ञा गर्छु)।
यो एक छ प्रार्थना हृदय देखि बहन्छ ठीक छ, धेरै पटक सम्बन्ध मा संलग्न व्यक्ति मध्ये एक यो पर्याप्त छैन जस्तो लाग्न सक्छ ...
ती चीजहरू उनीहरूको रूपमा जाँदै छैनन् वा केहि थप ईन्धन आवश्यक छ र त्यो त्यहि हो प्रार्थना यो हामीले पाउन सक्ने सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार बन्छ।
मेरो बिचार गर्न पवित्र प्रार्थनामा म कहिले प्रार्थना गर्न सक्छु?
के तपाईं कहिले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने जान्न चाहानुहुन्छ?
जब हामी आवश्यकता महसुस गर्दछौं हामी यो प्रार्थनालाई शान्ति र विश्वास संग गर्न सक्छौं।
हामी जहाँ भए पनि, यसले विश्वास र आत्माबाट मात्र लिन्छ।
यसले दिन वा समयलाई फरक पार्दैन। महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको विश्वास हुनु हो.
के प्रार्थनाले छिटो काम गर्दछ?
प्रार्थनाको जवाफ दिनको लागि आफैंमा खास समय हुँदैन तर यस पटक त्यहाँ हजारौं विश्वासीहरू छन् जसले यो सुनिश्चित गर्छन् कि पवित्र मृत्युलाई उठाउने प्रार्थनाहरूको छोटो समयमा जवाफ दिइन्छ।
यो विश्वास वा पार गर्न सकिने आवश्यकताको गम्भिरता जस्ता धेरै कारकहरूमा निर्भर हुन सक्छ, यद्यपि त्यस्तो केहि सुनिश्चित गर्न गाह्रो छ, त्यसैले हामीले विश्वास गर्नुपर्दछ कि कार्यहरू सही समयमा जवाफ दिइन्छ, पहिले वा पछि होईन।
मेरो बारेमा सोच्न को लागी प्रार्थना गर्दछ अर्को व्यक्तिको विचारमा उपस्थित हुनुहोस्.
यो उठ्न सक्ने सबै परिस्थितिहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र प्रेमको साथ केहि गर्न नसक्ने सम्बन्धहरूको लागि पनि।
यो एक शक्तिशाली प्रार्थना हो जुन जिम्मेवारीका साथ हुनुपर्दछ किनभने यसको उद्देश्य वा लक्ष्य हुनुपर्दछ किनकि हामीले अरूको सोचमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नु हुँदैन यदि हामीले पहिल्यै योजना बनाइसकेका छैनौं भने यो वास्तवमै प्रभावकारी हुन्छ।
यो सँधै पवित्र मृत्युको प्रार्थनाको शक्तिमा बढ्छ मेरो बारेमा सोच्नको लागि।
सान्ता मुर्तेलाई प्रार्थना गर्नुहोस् प्रियलाई फर्काउन
असम्भव प्रेमको लागि पवित्र मृत्यु प्रार्थना